Mayelana NATHI - Xuzhou Chuancheng Glass Products Co, Ltd.
I-Xuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD.is enhlangano yokukhiqiza ekhiqiza ubuciko bokukhiqiza amabhodlela engilazi, ukusika ubuchwepheshe, imikhiqizo ephezulu yengilazi eyenziwe ngengilazi. Le nkampani enamanzi ahamba kahle, umhlaba kanye nokuhamba komoya, eduze kwetheku laseLianyungang. Sinezintambo ezi-5 zokukhiqiza ezizenzakalelayo kanye nemigqa engama-20 yokufakelwa, engakhiqiza amabhodlela ayizigidi ezingama-2,8 ngosuku. Abasebenzi benkampani yethu abakhona bangaphezulu kwama-500, kufaka hlangana nabasebenzi abaphezulu abangama-28 abanolwazi nabasebenzi bokuhlola ikhwalithi abayi-15. Inkampani yethu ihlala ilandela insizakalo, isebenza ngokweqiniso, Qhubeka ithuthukisa, ikhwalithi kuqala, Ukubaluleka kwamakhasimende '.
Ifektri yethu ikhiqiza izinhlobo eziningi eziyinhloko
Ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nohlelo oluphelele, lokulawulwa kwekhwalithi yesayensi, sesivele sisungule ubudlelwano bebhizinisi namakhasimende amaningi wasekhaya nawangaphandle. Wokwethembeka okukhulu, amandla enkampani kanye nekhwalithi yomkhiqizo.
Kungani ukhethe iXuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD.
ifektri ye-ur ikhiqiza izinhlobo ezingaphezu kwezingu-800 eziphambili: Ibhodlela lengilazi yezinyosi, ibhodlela le-jam ingilazi, ibhodlela le-soy ibhodlela, ibhodlela leviniga, ibhodlela lamafutha omnqumo, ibhodlela lamafutha, ibhodlela lewayini, ibhodlela lesiphuzo, ibhodlela lengilazi ibhodlela, ibhodlela lewayini lesithelo, ibhodlela lewayini lempilo, ibhodlela lejusi, ibhodlela lomuthi, ibhodlela lekhofi, inkomishi, ibhodlela, ibhodlela lengilazi, isipikili sengilazi, imbiza yengilazi, indebe yokusiphatha, amanzi. Indebe, ibhodlela le-ketshezi lomlomo, ibhodlela letiye lesithelo, ibhodlela lewayini lesithelo, ibhodlela leviniga lebhodlela, ibhodlela lezimonyo, ibhodlela le-perfOume, ibhodlela lamafutha omoya, ibhodlela likakhilimu, ibhodlela lesiko lezicubu nokunye. Ingasetshenziswa futhi ekusetshenzisweni okujulile kwemikhiqizo yengilazi njengokufriza, ukufafaza, ukuphrinta kwesilika, ukubhaka, ukuqopha, ukuthambisa ukotini, njll.